Shir looga hadlayay Baahinta Awoodda Dowladda oo Muqdisho ka dhacay | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Shir looga hadlayay Baahinta Awoodda Dowladda oo Muqdisho ka dhacay
Shir looga hadlayay Baahinta Awoodda Dowladda oo Muqdisho ka dhacay
Wajiga sadaxaad iskaashi wadajirka ah ee baahinta awooda dowladda shanta sano ee soo aadan 2018-2022 ee JPLG ayaa looga hadlay shirkan oo uu gudoominayay Wasiirka Armaha Gudaha. Federaalka iyo dib u heshiisinta Soomaaliya ayna goob joog ka ahayen wasirada arimaha gudaha dowlad goboleedyada iyo hey’adaha taageera daadajinta Awooda dowladda
Wasiirka Arimaha gudaha, Federaalka iyo dib u heshiisiinta Xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Saciid (Juxa) waxa uu sheegay in Baahinta Awooda dowladda ay laf dhabar u tahay howlaha horyaala Dowladda dhexe Soomaaliya.
Wasiirka Arimaha gudahaa ee koofur Galbeed Madoobe Nuunoow Maxamed oo u hadlay wasiirada dowlad goboleedyada waxa uu qiray in talada maraysa waqtigan in laga soo bilaaba dadweynaha oo ah meeshii loo baahnaa, wasaaradda arimaha gudaha ee Soomaaliya ayuuna ku amaanay doorka wanaagsan ay ka qaadanayso daadajinta awooda dowladda.
Xoghayaha Maamulka gobola Benaadir Subeyda Maxamed Muqtaaq waxa tilmaamtay inay Muhiim tahay in la cadeeyo doorka Gobolka Benaadir ugu Aadan Barnaamijkan looga tala galay in lagu wajaho baahinta awooda dowladda ee 5 ta sano ee soo aadan .
Wasiirka arimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa waxa uu ku amaanay dowlad goboleedyada Koofur Galbeed iyo Jubbaland u dhaqaaqidooda dhismaha dowlada Hoose, isaga oo ku dhiira galiyay inay dardar galiyaan sameynta sharciga dowladaha hoose dowlad goboleedyada Hirshabeele iyo Galmudug, waxa uu soo jeediyay in muhiimad la siiyo gobolka Benaadir, Beesha Caalamka ayuuna ka codsaday inay kordhiyaan dhaqaalaha ay ugu tala galeen daadajinta awooda dowligaa.
Nidaamka dowladaha hoose hore waxa looga hirgaliyay gobolada Somaliland iyo Puntland, Koofurta dalka oo uu ka bilowday sanadkan degmada Xudur oo xarun ah gobolka Bakool Koofur Galbeed Soomaaliya ayaa noqotay degmadii ugu horeysa.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo “Waxaan idin ka filaynaa in aad nagala shaqaysaan in aan alshabaab ka tir tirno guud ahaan dalka.”
Next articleTaliyaha Ciidanka X.D.S. oo kulan la qaatay Taliyaha Tababarrada Howlgalka Midowga Yurub ee Soomaaliya